Prezidaantiin Burkinaafaasoo Lootee Seentoota Irratti Tarkaanfii Akka Fudhataniif Gaafatme
FAAYILII - Gumna waraanaa Burkiinaa Faasoo, naanoo Kaayaa keessatti Sadaasa, 20, 2021.
Kamiisa kaleessaa lootee seentoota Jihaad kanneen biyyatti keessa jiran irratti tarkaanfii jabaan akka fudhatamuuf gaaffiin kan dhiyaateef Prezidaantiin Burkiinaafaasoo, rakkoo lootee seentootonni uumaniin mummicha ministeera biyyatti aangoo akka gadhiisan eega dirqisiisee jira.
Gaaffiin kun prezidaantichaaf dhiyaachuun mummichi ministeeraa aangoo eega gadhisanii guyyaa tokko booda. Waggootii darban 6f wal waraansii dhiiga dhangalaasisee fi lubbuu namoota kuma lamaa galaafate akkasumas uummata Miliyoona 1.4 manaa fi qe’e irraa godaansisee sanaan mufannaa uumamee hanqiisuuf yaalamaa jira.
Mummichi ministeera biyyatti aangoo gadhisuu isaanii prezidaantichi Robii dabree simatanii jiru.
Akka seera biyyattitti mummichi ministeeraa aangoo gadhiifnaan kaabineen guutuummaatti akka aangoo gadhiisan waan ajajuuf jecha, Tarkaanfiin amma fudhatame kun mootummaan amma jiru aangoo akka gadhiisu taasiissa jedhamee jira..
Mummicha ministeeraa fi mootummaa haaraa kanneen waraanuu danda’an hanga danda’ameetti hatattamaan argamuu qabu jechuun, Gaazexaan mootummaa Sidwaya jedhamu gaafatee jira.